warkii.com » Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyga Ee Maanta Oo Khamiis Ah Ay Qoreen Wargeysyada Yurub
Maxay tahay sababta Cumar Filish isugu yeeray Mursal iyo Cabdi Xaashi?
Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyga Ee Maanta Oo Khamiis Ah Ay Qoreen Wargeysyada Yurub
Dabcan waxaan wali si rasmi ah u furmin suuqa kala iibsiga ee xagaaga waxaana lagu jiraa bishii July balse kooxaha ugu waaweyn qaarada Yurub ayaa ah kuwo u tafo-xaydanaya suuqa iyagoo sii dajinaya qorshayaasha ay ku galayaan.
Inuu kubaddii cagta hakiyay fayraska Korona walow horyaalada qaar dib loo bilaabay ayaa dhalisay in kooxaha kala duwan gaar ahaan raga suuqa u qaabilsani ay helaan wakhti badan oo ay suuqa kaga faaloodaan.
Haddaba, waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyey suuqa iibka ciyaartoyga ee ay maanta oo Khamiis ah qoreen Wargeysyada waaweyn ee Yurub:
Manchester City ayaa bixisay lacag carbuun ah oo dhan £65 milyan oo Gini oo ay kasii bixisay difaaca Napoli iyo xulka Senegal ee Kalidou Koulibaly oo ah 29 jir ay kula tartamayeen kooxaha Liverpool iyo Manchester United, iyadoo qiimihiisana hore loo sheegay inuu yahay £80 milyan oo Gini. (Mirror)
Man City waxa kale oo ay bartilmaameed ka dhiganaysaa weeraryahanka reer Argentine ee Lautaro Martinez oo ah 22 jir u ciyaara Inter Milan, lalana xidhiidhinayay Barcelona, waxaanay qorshaynayaan inay ku beddelaan Sergio Aguero oo 32 jir ah. (Sky Sports)
Barcelona ayaa ku qanacsan inay kaga guuleysan doonto Manchester City saxeexa Martinez. (Marca)
Khadka dhexe ee reer France ee Paul Pogba oo 27 jir ah, waxa uu qarka u saaran yahay inuu heshiis cusub oo shan sannadood ah u saxeexo Manchester United, waxaana la filayaa in heshiiska lagu dhawaaqo dhamaadka xili ciyaareedka. (Sun)
Bayern Munich ayaa £36.2 milyan oo Gini ku xidhay saxeexa kubbad-sameeyaha reer Spain ee Thiago Alcantara oo ah 29 jir lala xidhiidhinayo Liverpool (Sport Bild)
Bayern waxay rumaysan tahay in Chelsea ay kaga horreyso tartanka laacibka khadka dhexe ee Kai Havertz oo ah 21 jir ka tirsan Bayer Leverkusen. (Sport Bild)
Everton, Atletico Madrid iyo Bayern Munich ayaa ku tartamaya laacibka garabka weerarka uga ciyaara Crystal Palace ee Wilfried Zaha oo u dhashay Ivory Coast. Newcastle United ayaa sidoo kale xiisaynaysa 27 jirkan. (Mail)
Khadka dhexe ee Atletico Madrid iyo xulka Ghana ee Thomas Partey oo 27 jir ah ayaa lagu soo warramayaa inuu iska diiday Arsenal oo uu heshiis cusub u saxeexayo kooxdiisa oo u ballanqaaday in mushaharkiisa ay u laban-laabayso. (GhanaXoccerNet)
Pep Guardiola ayaa doonaya inuu Man City kusoo celiyo kubbad-sameeyaha reer Brazil ee Douglas Luiz oo ah 22 jir u ciyaara Aston Villa. (Birmingham Mail)
Laacibka khadka dhexe uga ciyaara Liverpool ee Adam Lallana oo 32 jir ah, wuxuu go’aansaday inuu ka tago Reds marka uu horyaalku dhamaado, waxaana xiisaynaya Leicester City, Burnley iyo Brighton. (Star)
Difaaca reer Portugal ee Diogo Dalot oo 21 jir ah, isla markaana aan sagaalkii ciyaarood ee ugu dambeeyey ka mid noqon safka kooxda Manchester United ayaa rajaynaya inuu beddelo Luke Shaw iyo Brandon Williams oo dhaawac ah. (Manchester Everning News).
Maxay tahay sababta Cumar Filish isugu yeeray Mursal iyo Cabdi Xaashi?October 1, 2020